प्रधानमन्त्रीबाट फाष्ट ट्रयाक शिलान्यास
१४ जेठ, बारा । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्ये सर्वाधिक चर्चामा रहेको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्र्याक) को प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गरेका छन् । बाराको निजगढका आइतबार विशेष समारोहको आयोजना गरी प्रधानमन्त्री दाहालले फाष्ट ट्रयाकको शिलान्यास गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले फाष्ट...
फेरि शुरू भयो सडक विस्तार
८ फागुन, हेटौंडा । डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले फेरि सडक विस्तारको काम शुरू गरेको छ । कार्यालयले अाईतबार विहानैबाट सडक विस्तारको काम शुरू गरेको हो । विहान हेटौंडाको बुद्धचोकमा रहेको ट्राफिक भवन भत्काएको छ । कार्यालयले ट्राफिकसंगैका घर समेत भत्काउने जनाएको छ । अदालतले रोकेको बाहेकका संरचना भत्काउने काम निरन्तर हुने सडक कार्यालयले...
२५ मिटरबारे बाबुरामले भने–‘बैकल्पिक सडक भए प्रयोग गर्न सकिन्छ’
२६ माघ, हेटौँडा । नयाँ शक्ति नेपालका केन्द्रीय संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले २५ मिटर सडक विस्तार गर्दा बैकल्पिक सडक भए प्रयोग गर्न सकिने बताएका छन् । उनले सडक विस्तारका क्रममा कम क्षतिका लागि बैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न सकिने बताए । मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघको टोलीसँगको भेटमा डा. भट्टराईले भने–‘अपरिवर्तनिय भन्ने केही छैन, बैकल्पिक सडक...
आयोजनाको प्रगती नियमित जानकारी गराउन प्रशासनद्वारा जिविसलाई निर्देशन
२१ माघ, हेटौंडा । जिल्ला प्रशासन मकवानपुरको नेतृत्वमा जिल्लामा संचालित ४ योजनाको अनुगमन गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा स्थानीय विकास अधिकारी, विषयगत कार्यालयका प्रतिनिधिहरु लगायत सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको टोलीले जिल्ला विकास समितिको मकवानपुरद्वारा सञ्चालित ४ वटा आयोजनाको अनुगमन गरेको हो । टोलीले भारतीय...
गाउँपालिका केन्द्र जाने बाटोमा स्थानीयको चासो
१८ माघ, हेटौंडा । नयाँ संरचना अनुसार गठित स्थानीय निकाय र त्यसका केन्द्रहरुका बारेमा इलाका योजना तर्जुमा गोष्ठीहरुमा चासो व्यक्त हुन थालेको छ । पुरानो संरचना अन्तर्गत मकवानपुरको इलाका नं ५ मा आयोजित गोष्ठीमा सहभागीहरुले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । इलाका नं ५ अन्तर्गत काँकडा गाविसको कार्यालय शिलाधुनीमा आयोजित...
निजगढ स्मार्ट सिटि बन्ने, हेटौँडा चाँही ?
१७ माघ, हेटौँडा । सरकारले बाराको निजगढलाई ‘स्मार्ट सिटि’ बनाउने भएको छ । सरकारले निजगढसहित ६ वटा शहरलाई स्मार्ट सिटिको रुपमा विकास गर्ने भएको हो । काठमाण्डौं उपत्यकामा एक र उपत्यका बाहिर ६ वटा स्मार्ट सिटि बनाउने अवधारणा अनुसार निजगढ छनौटमा परेको छ । निजगढसहित लुम्बिनी, पालुङटार, वालिङ, दुल्लु र अमरगढीलाई पनि स्मार्ट सिटिको रुपमा...
प्रशासकको सरुवाले रोकिन्छ त सडक विस्तार ?
फाइल तस्विर १६ माघ, हेटौँडा । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीको सरुवासंगै हेटौँडा सडक विस्तारको काम रोकिने चर्चा चल्न थालेको छ । सडक विस्तार थालकै कारण सरुवा भएको भन्दै धेरैले सामाजिक सञ्जालमा प्रशासकको सरुवासँगै सडक विस्तारको काम रोकिने दावि गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय २५ मिटर क्षेत्रमा घर संरचना रहेका...
वन विज्ञान पोखराको दोस्रो टोली रानी वनमा
भीमसेन पौडेल १४ माघ, हेटौँडा । वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखराको टोलीले हेटौँडा–६ चौघडामा रहेको रानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विहीवार अध्ययन अवलोकन गरेको छ । विएससी प्रथम बर्षका विद्यार्थीहरुले समूहको अध्ययन अवलोकन गरेका हुन् । टोलीलाई रानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपाने सचिव नानमिाया रुम्वा,...
मकवानपुरमा एयरपोर्ट निर्माणको तयारी
१३ माघ, हेटौडा । मकवानपुरको हेटौडा–१४ पदमपोखरीमा एयरपोर्ट निर्माणको तयारी थालिएको छ । एयरपोर्ट निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विहिबार नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको एक टोलीले स्थानीयसँग छलफल गरेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँसहित प्राधिकरणको टोलीले स्थलगत अवलोकन गरी स्थानीयसँग...